बिदेशमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुने नेपालीको संख्या १६० पुग्यो - Patipauwa
बिदेशमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुने नेपालीको संख्या १६० पुग्यो
आइतबार, ०४ साउन २०७७, ०८ : ०४
खाडी देश कतार, कुवेत र यूएईमा एक हप्तामा १६ जना नेपालीको कोरोनाको कारण ज्यान गएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार गएको साता कतारमा ८, कुवेतमा ३ र यूएईमा ५ जना नेपालीको कोरोनाबाट ज्यान गएको हो ।
कतारमा ज्यान गुमाउने ८ जनामध्ये २ जनाको मृत्यु अघि नै कोरोना पुष्टि भएको र बाँकी ६ जनाको मृत्युपछि कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य समितिले जनाएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा सञ्जिव सापकोटाका अनुसार शनिबार साँझसम्म विभिन्न १४ देशमा रहेका १ सय ६० जना नेपालीको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ ।
समितिका अनुसार २० देशमा रहेका नेपालीहरु पूर्ण रुपमा कोरोना मुक्त भएका छन् । अहिलेसम्म कोराना सङ्क्रमितमध्ये ९३ प्रतिशत नेपालीहरु निको भएको स्वास्थ्य समितिले जनाएको छ । पछिल्लो समय अफ्रिकी देशमा कोरोना सङ्क्रमित नेपाली बढेका थिए । तर अहिले सबैजना उपचारपछि निको भएका छन् ।
अहिलेसम्म विदेशमा ३० हजार ५ सय ७१ जनामध्ये २८ हजार ६ सय ८१ जना नेपाली सङ्क्रमण मुक्त भएको गैरआवासीय नेपाली संघले जनाएको छ । अहिलेसम्म विदेशमा रहेका ३१ हजार ५ सय २१ जना नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरुमध्ये २८ हजार ६ सय ८१ जना निको भएको गैरआवासीय नेपाली संघले जनाएको छ । तर मध्यपूर्वका केही देशमा रहेका नेपालीहरुमा भने अझै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रहेको छ ।
बुटवलको कोरोना अस्पतालमा कपिलबस्तुका २ जनाको मृत्यु
कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा बस्दा के गर्नु पर्दछ ?
कपिलबस्तुमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द, उल्लंघन गरे कारवाही
बुटवलको कोरोना बिशेष अस्पतालमा सिस्टर रोबोटको सेवा र सुरक्षा
खाली पेट तातो पानी किन पिउने ?
गरिमा बैङ्कमा कार्यरत कर्मचारीमा कोेरोना पुष्टि भएपछि बैङ्क सिल
बुटवलमा लकडाउन सुरु, भदौ ५ सम्म कायम रहने
भदौ ५ गते सम्म बुटवलमा लकडाउन
खानेपानी सस्थान बुटवलका प्रमुख श्रोत नखुलेको रकम सहित पक्राउ
रुपन्देहीमा आजदेखि दैनिक ८ घण्टा मात्रै पसल व्यबसाय सञ्चालन
रुपन्देही जिम तथा फिटनेस व्यबसायी संघमा बिजेन्द्रको नेतृत्व
विश्वकप क्रिकेट तोकिएकै मितिमा हुने
एसईईको नतिजा प्रकाशन गर्ने काम अन्तिम चरणमा
स्थानीय साधनले पनि बाढीबाट जोगाउँछ
लकडाउनले २२ प्रतिसत मजदुरको रोजगारी खोस्यो , होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा बढि असर
बुटवल, रुपेन्देही, नेपाल
भवानीप्रसाद पाण्डे ९८५७०२६२२३
© PATIPAUWA.COM 2020, ALL RIGHT RESERVED.